DEG DEG: Tababaraha Cusub ee Real Madrid oo xilka Xulka laga Ceyriyay – Gool FM
DEG DEG: Tababaraha Cusub ee Real Madrid oo xilka Xulka laga Ceyriyay
Byare June 13, 2018
(Europe) 13 Juunyo 2018. Xiriirka Spain ayaa abaabulay shir deg deg ah oo la sheegay in xilka looga qaadayo Julen Lopetegui kaddib markii uu heshiis la gaaray Los Blancos isagoo ku wargalin xulka Spain.
Shirka Jaraa’id ayaa labo saacadood ku dhawaad dibu dhacay, balse waxaa iminka Si Rasmi ah loo sheegay in Lopetegui laga ceyriyay xilka Tababranimo ee xulka Spain isla markaana uusan ku hogaamin doonin Koobka Adduunka oo hal maalin ka harsan.
“Waxaan ku qasbanaanay inaan jabino heshiiska aan kula jirnay Julen Lopetegui,” Waxaa sidaa yiri Madaxwaynaha xiriirka FA ga Spain.
“Lopetegui Wuxuu ahaa Tababare wayn, balse ma aqbali karno hab dhaqankan.
“Tani waxaa la sameeyay innagoon ka warqabin, ma dareemayo in la I qiyaanay, balse tani waa sida ay tahay inay noqoto.
Luis Rubiales ayaa xaqiijiyay in ciyaartoyda xulka Spain ay isku dayeen inay bad baadiyeen tababarahooda si uu Koobka Adduunka uGu hogaamiyo balse ay go’aankan qaateen.
“Waan la hadlay ciyaartoyda. Waxay sameyn doonaan wax kasta si ay si fiican uga qeyb qaataan Koobka Adduunka. Go’aankan wuxuu heystay taageerada buuxa ee FA.
“Haddii uu qof doonayo inuu la hadlo shaqaalaheen, waa inuu innagana nala hadlaa, tani waa waxyaabaha aasaasiga ee loo baahan yahay. Xulka qaranka waxaa leh Qaranka oo dhan.”.
"Uma maleynayo in Florentino Perez uu heysto lambar taleefankeyga”....David de Gea